Git Sangit News » ४ पुरुषसँग ल’सपस गरेको भन्दै सुपर ग्लूले टालिदिए श्रीमतीको यो’नि !
४ पुरुषसँग ल’सपस गरेको भन्दै सुपर ग्लूले टालिदिए श्रीमतीको यो’नि !
प’रपुरुषसँग ल’सपस गरी आफूलाई धोका दिएको भन्दै एकजनाले आफ्नी श्रीमतीको गो’प्य अं’गलाई नै सुपर ग्लू लगाएर टालिदिएका छन् । आफ्नो व्यापारिक भ्रमणको सिलसिलामा घरबाहिर रहँदा श्रीमतीले पर’पुरुषसँग सम्बन्ध स्थापना गरेको थाहा पाएर त्यसो गरेको ती व्यक्तिको भनाइ छ ।
आफ्नी श्रीमतीको बानीबाट आजित भएर उनको गो’प्य अं’गमा सुपर ग्लू लगाएर टालि*दिएको उनको जिकिर छ । यो घट’ना अफ्रिकी मुलुक केन्याको हो । दक्षिणी केन्याको किटुयी शहरमा बसोबास गर्ने ३६ वर्षे डेनिस मुमोले श्रीमतीको चालामालाबारे आफूले सामाजिक सञ्जालका सन्देशबाट थाहा पाएको प्रहरीलाई बताएका छन् ।
‘जबजब म व्यापारिक भ्रमणको सिलसिलामा घरबाहिर हुन्थेँ । मेरी श्रीमती अरु नै सँग जाँदिरहिछिन् ’ उनको भनाइ छ । आफ्नी श्रीमतीको बानीबाट आजित भएर उनको गो’प्य अं’गमा सुपर ग्लू लगाएर टालि*दिएको उनको जिकिर छ । उनले व्यापारिक भ्रमणको सिलसिलामा छिमेकी मुलुक रुवाण्डा जानुअघि आफूले त्यसो गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
आफ्नो गो’प्य अं’गमा सुपर ग्लू लगाएपछि उनकी श्रीमतीलाई भने अस’ह्य पी’डा भएको र छिमेकीहरुको सहयोगमा उनलाई उपचार गराइएको बेलायतको डेली स्टार अनलाइनमा समाचार छ । त्यसपछि मुमोलाई प्रहरीले पक्रा’उ गरेको हो ।
उनले प्रहरीसामु आफ्नो विवाह जोगाउन त्यसो गरेको स्वीकार गरेका छन् । साथै आफ्नी श्रीमतीलाई १ सय को’र्रा हान्न माग गर्दै अदालतमा मु’द्दा समेत दायर गरेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १०:१०